२५ औं तामाङ प्रसारण दिवस मनाइयो : तामाङ भाषा नारामा मात्रै होइन, व्यावहारमा पनि लागु गराैं - Fonij Korea
२५ औं तामाङ प्रसारण दिवस मनाइयो : तामाङ भाषा नारामा मात्रै होइन, व्यावहारमा पनि लागु गराैं
लेखक: फोनिज कोरिया संवादाता	| प्रकाशीत मिति: August 19, 2019
तामाङ पत्रकार संघ दक्षिण कोरियाले २५ औं प्रसारण दिवस (रजत जयन्ती) मनायो । शनिबार बेलुका शुभकामना तथा नेपाली पत्रकारितामा तामाङ पत्रकारको अवस्था र चुनौती बारे कार्यपत्र प्रस्तुतसँगै मनाएको हो ।
वि.सं. २०५१ भदौ १ गते रेडियो नेपालबाट तामाङ भाषाको समाचार प्रशारण सुरु भएको दिनलाई आधार मानेर तामाङ पत्रकार संघ तामाङ प्रशारण दिवस मान्दै अाएकाे छ । सउलमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कोरियाका अध्यक्ष युगेल तेन्डुप शेर्पाले यो वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘आदिवासी भाषा वर्ष’ मुल नारा तय गरेर २५ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाइरहदा तामाङहरुको सञ्चार क्षेत्रमा भाषा प्रसारणको पनि २५ वर्ष पुगेकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै शुभकामना दिए । उनले यी यस्ता गतिविधिले जातिय, समुदायका पहिचान स्थापित हुन टेवा पुग्ने बताए ।
त्यस्तै विशेष अथिति नेपाल पत्रकार महासंघ कोरियाका अध्यक्ष रञ्जनराज कुँवरले विदेशमा गरिने पत्रकारिताले थाेरै भए पनि विदेशमा हुने काम र जीवनशैलीका वारेमा थाहा हुने जानकारी गराए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका काेरियाका अध्यक्ष पूर्व चित्रबहादुर मोक्तान, तमु धीं काेरियाका अध्यक्ष जीत गुरूङ, किराँत राइ यायाेख्खाका अध्यक्ष वालकृष्ण वान्तावा राइ, नेपाल तामाङ संघ काेरिया अध्यक्ष मेघप्रसाद तामाङ, रामेछाप सक्पर्क समितिका अध्यक्ष रवि प्रताप घिसिङ, मकवानपुर सम्पर्क समितिका अध्यक्ष राजकुमार गाेले, नुवाकाेट सम्पर्क समितिका अध्यक्ष सन्ताेष राइ, प्रदेश नं. ३ एकता समाजका अध्यक्ष किशाेर व्लाेनले रेडियो नेपालमा प्रसारण हुने तामाङ भाषाको समाचारको सम्झना गर्दै भाषाले मिडियामा पाएको प्राथामिकता बारे चर्चा गरेका थिए ।
फोनिज कोरियाको अध्यक्ष तथा संघका सल्लाहकार पत्रकार गोकुल थोकरले नेपाली पत्रकारितामा तामाङ पत्रकारको अवस्था र चुनौती बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमा व्यावसायीक पत्रकारितामा तामाङ पत्रकार निकै पछाडी रहेको सुनाए । उनले तामाङ भाषामा समाचार प्रसारण भएको २५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा अब तामाङ पत्रकारिताको स्तरियताको मापन गर्ने बेला अाएकाे बताएका थिए । यस्तै तामाङ पत्रकारले मिडियामा आगामी दिनमा तामाङ पत्रकार भइहिड्न र देख्दा सजिलो लागे पनि त्यति सजिलो नभएको कार्यपत्रको चुनौतीमा प्रस्तुत गरे । नेपाली भाषामा पत्रकारिता गर्नलाई भाषा, सम्बन्धीत ‘विट’ त्यही ’विट’को राम्रो ज्ञान लिन हुनेपर्ने चुनौती रहेको बताए । नत्र हामी यति धेरै छौ भनेर टाउको गनेर मात्र हुँदैन । सधै रेडियोमा सेलो जुहारी बजाएर नाचेर मात्रै पनि तामाङ पत्रकारिता अघि बढ्दैन, कार्यत्रपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सिमा लामाको सभापतित्वमा भएको थियो । उनले कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुलाई धन्यवाद दिर्दै पत्रकार संघमा सबैले साथ सहयोग दिएको खुशी व्यक्त गरिन् । उनले विगतमा संघले सञ्चालन गरेका पत्रकारिता तालिमबाट काेरियामा रहेका पत्रकारिता गर्न चाहनेहरूलाइ फाइदा भएकाे बताइन् । उनले तामाङ भाषालाई संरक्षणको नारा मात्रै होइन, दैनिक जीवनमा पनि प्रयाेग गर्नु पर्ने बताइन । कार्यक्रममा तामाङ वक्ताहरूले तामाङ भाषामै बाेलेका थिए ।